Chindau - Wikipedia
(Redirected from ChiNdau)
Mhuri yemutauro Chibantu
Chindau (Mamwe mazita: Ndau kana Ndzawu) mutauro weChishona (kana Chivanhu) unotaurwa kumabvazuva kwenyika yeZimbabwe nevanhu vanonziVandau kana Mandau, uye mumatunhu eMozambique. Chindau chiChimanyika chine kahunhu ke Chinguni nokuti Vandau vakasvikirwa ne Vanguni vakagara, kuroora uye kutaudzana nawo, nekuda kwe izvi Chindau chine mashoko eChinguni (vanotaura mamwe mashoko sezvinoitwa ne Vanguni), asi kunyangwe hazvo zvakadaro Chindau chinonzwika kuVashona kwete Vanguni nekuti ruzhinji rwayo rwakaramba rwakafanana neChimanyika kakuru.
Vandau vanowanikwa muhuwandu ruzhinji kunzvimbo senge Chipinge, Chimanimani, Manicaland uye kune huwandu hwudoko hweVandau vanowanikwa wo kuMasvingo munzvimbo dzinenge Bikita. Mumitauro ye Chivanhu, Chikaranga ne Chindau ndicho chinozivikwana kuti chakasiyana nokuda kwemabhi asingawanikwe kuchimwe Chivanhu senge x, c, l kana q.
Pamusoro pezvo, Vandau kana Mandau vanotora 3% yehuwandu hweVashona.
Muenzaniso weChindau[chinja | edit source]
= M A S H O K O
akafohla = akatizira
kuxapa = kuridza tsamwa
kuqambaya = kurara
Chitendero muChindau[chinja | edit source]
Muenzaniso uri pasi unotaridza musiyanpo uripi pakutaurwa kweChindau neChi ezuru.
Baba edu ari mudenga, ngariremeredzwe zina renyu
UMambo hwenyu ngahuuye
Kuda kwenyu ngakuitwa munyika kudai ngomudenga
Tipei nege kurya kwedu kwatinotama nyamashi
Tirekererei ndaa dzedu kudai tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri
Munamato uyu uchitaurwa neChizezuru unoti:
Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudziwe.
UMambo hwenyu ngahusvike. Kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga.
Tipei nhasi kudya kwedu kwezuva.
Tiregererei zvatinokutadzirai sekuregerera kwatinoita vakatitadzira.
Musatipinze mukuedzwa, asi mutinunure mune zvakaipa.
VaVenda vanoti ndau kureva shumba.
Sangho vanoti ndau (n. blacksmith) kureva mupfuri. Mamwe mazwi: ndau (accident) kureva tsaona.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chindau&oldid=95551"
Mbeu dze mitauro ye Chibantu
This page was last edited on 7 Chikumi 2022, at 02:53.